Beelaha oo isku haysta qaybsashada ergooyinka soo xulaya Xildhibaanada – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 September 24 Beelaha oo isku haysta qaybsashada ergooyinka soo xulaya Xildhibaanada
Beelaha oo isku haysta qaybsashada ergooyinka soo xulaya Xildhibaanada
Posted on September 24, 2016 by Ali Omar Ghedi | 0 Comments
Muqdisho, September 24, 2016: Khilaafaad badan ayaa ka taagan sida loo qeybsanayo ergooyinka Beelaha ee soo dooranaya Xildhibaanada Aqalka hoose, iyadoo beelaha qaar ay isku maandhaafsan yihiin soo xulitaanka tirada beel walba ka soo gaartay 51-da ergo.
Waxaa sheegayaa in is-maadhaafka ka jira soo gudbinta ergada beelaha, ayaa waxaa qeyb ka ahaa siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan dowladda waqtigeeda dhamaaday oo doonaya in shaqsiyaad si gaar ah u wataan in loogu daro, si ay iyaga u doortaan berrito.
Sidoo kale wararka qaar ayaa intaa ku daraya odayaasha dhaqanka ee 135-ka ah ay u gudbiyeen Beelaha inay soo gudbiyaan liiska 51 ergo, hase ahaatee uu is qab qabsi ka jiro.
Beelaha Muddullood ayaa ka mid ah beelaha isku heysta ergada, waxaana maalmahan shirar beelaha qaar ay lahaayeen oo looga hadlayay qaabka loo qeybsanayo ergada ay noqdeen kuwo lagu kala tagay, markii beelo qaar ay damceen inay ka sad-badsadaan beelaha kale ee yar yar.
Waxaa kale oo meesha ku jira in Siyaasiyiin damac ku jira ay doonayaan in xubno iyaga taageersan loogu daro ergada, taas ayaana sabab u ah in waqtigii la filayay soo gudbinta liiska ergooyinka uu dib u dhac ku yimaado.
Guddiga doorashada ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu ka hadlo caqabadaha ka taagan ergooyinka aan wali la soo gudbin iyo dib u dhacyada ku imaan kara doorashada, waxaana dhowaan ugu baaqeen Odayaasha inay soo gudbiyaan liiska rasmiga ah ee ergooyinka.
Olole ballaaran oo ay wadaan Musharaxiin u taagan kuraasta Xildhibaanada ayaa ka socda magaalada Muqdisho, waxaana arrintan kala qeybsanaan ku kala eegtay xubno horay saaxiib u ahaa, oo markan noqday kuwo isku damac ah oo Xildhibaano wada raba intooda badan.
Beel walba ayaa laga doonayaa in kursiga Xildhibaanimo ee leedahay isku soo sharaxaan shan xubnood, waxaana soo dooran doona 51 ergo, iyadoo maalmahan ay isa soo tarayeen Musharaxiinta Xildhibaanada ee u taagan kursiga Xildhibaanimo ee beesha ay ka dhasheen
Dil Ka Dhacay Dagamo Ka Tirsan G/Sh/Hoose November 4, 2017
R/wasaaraha Kheyre Oo Maanta Kormeeray Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska September 4, 2017
Diblomaasiyiinta Reer Galbeedka oo isaga baxay caleema saarki madaxweyne Museveni May 13, 2016
“Waa dhamaatay waqtigii guryaha xoog lagu heysan jiray” July 4, 2016
Somalia: Who runs new banknote factory in Puntland? October 17, 2015
Madaxweynaha oo dib u dhigay socdaal uu ku tegi lahaa Sweden March 1, 2016
Jaamacadda Carabta oo ku baaqday in laga qaado Soomaalia cunaqabateynta hubka March 12, 2016
Ergaddii Xildhibaanada dooratay oo askar laga dhigayo. July 20, 2017
Three women voted in, former warlord locked out in Puntland Senate polls October 21, 2016
Somaliland: 25 years as an unrecognised state May 24, 2016
Doorashooyinka Soomaaliya ee 2016 oo dib u dhac hor leh looga baqo November 7, 2016